Kulan looga hadlayo dimuqraadiyadda Puntland oo lagu qabtay Bossaso. – Radio Daljir
Nofeembar 27, 2012 8:14 b 0
Boosaaso,? Nov 27 – Kulan ay soo qaban qaabiyeen gudiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayna kasoo qayb galeen Xildhibaano katirsan Baarlamaanka, Wasiiro, Maamulka goobolka Bari, ururada Bulshada rayidka ah, iyo ?qaybo kale ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Gudoomiyaha gudiga KMG Doorashooyinka Puntland Md Maxamed Xasan Bare oo kulanka furay ayaaa sheegay in ujeeddada kulankani tahay sidii bulshada faham buuxa looga siin lahaa nidaamka Dimuqraadiyada ee Puntland hayaanka u tahay.
Cabdisamed Maxamed Gallan oo ah gudoomiyaha gobolka Bari ayaa hadal kooban oo uu kulanka ka jeediyey wuxuu siweyn ugu taageeray shirarka noocn ah ee dadka lagu faham siinayo Dimuqraadiyada & doorashooyin xor ah oo puntland ka dhaca.
Intaaasi kadib waxaa hadalka isaga danbeeyey masuuliyiin iyo wax ku ool kamid ah kasoo qayb galaayaashii kulanka iyadoo dhamaan dadkii hadalay ku baaqeen in la taageero nidaamka Asxaabta badan ee Puntland.